Diesel jenareta seti, Kugadzira seti, Genset, Cummins jenareta, Simba Chiteshi-KENTPOWER
KT Cummins Series Diesel jenareta
KT Perkins Series Diesel jenareta
KT Deutz Series Diesel jenareta
KT Doosan Series Diesel jenareta
KT KUBOTA Series Diesel jenareta
KT Mitsubishi Series Diesel jenareta
KT Yangdong Series Diesel jenareta
KT SDEC Series Diesel jenareta
KT Mamwe Brand Diesel jenareta
KT MTU Series Diesel jenareta
KT Yanmar Series Diesel jenareta
KT ISUZU Series Diesel jenareta
KT Ricardo Series Diesel jenareta
KT Yuchai Series Diesel jenareta
Diesel jenareta Zvikamu
Cummins jenareta Zvikamu
MITSUBISHI Jenereta Zvikamu
Perkins jenareta Zvikamu
Yangdong jenareta Zvikamu
KT Diki jenareta
KT Gesi jenareta Set
KT Yemagetsi Gesi jenareta set
KT Biogas jenareta seti
KT Yakakwira-Voltage jenareta
Mhosva dzekunze kwenyika
TINOPA ZVAKANAKA ZVINHU ZVAKANAKA
KT-cummins Series Diesel jenareta
Tsananguro: KT-cummins Series Diesel jenareta Cummins (NYSE: CMI) yakavambwa muna1919 uye inotungamirwa muColumbus, Indiana, USA. Cummins anotumidzwa zita rayo muvambi, Claire Lyle Cummins, anozvidzidzisa-ega makanika uye mugadziri wemagetsi. Cummins inotungamirwa muColumbus, Indiana, USA. Iyo kambani inopa masevhisi kune vatengi kuburikidza neayo mazana mashanu nemakumi mashanu ekuparadzira vamiririri uye anodarika zviuru zvishanu zvevatengesi munzvimbo dzinopfuura zana nemakumi matanhatu nenyika kumatunhu epasirese. Cummins ine 34,600 ...
Ona zvimwe zvigadzirwa >
KT-Mitsubishi Series Diesel jenareta
Tsananguro: Japan Mitsubishi Heavy Industries Co, Ltd. yakavambwa muna 1884. Iyo ndeimwe yemakambani epamusoro epasirose mazana mashanu uye inoverengerwa wechipiri muchikamu chemuchina. Mitsubishi Heavy Industries yakatanga kugadzira uye kugadzira injini dzedhiziri nemajenareta muna 1917. Dhizaini, kugadzirwa uye kuyedzwa kwezvikamu zvayo zvikuru zvakapedzeredzwa neMitsubishi Heavy Industries chete. Mitsubishi dizeli jenareta seti inogona kushanda yakasimba pasi peakakomba mamiriro ezvemamiriro ekunze ...
KT-Deutz Series Diesel jenareta
Tsananguro: Deutz FAW (Dalian) Diesel Injini Co, Ltd. inoumbwa neiye muvambi weinjini yepasi rose indasitiri -German Deutz AG uye neChina mota indasitiriMutungamiri weChina FAW Group Corporation akaisa mari inokwana RMB 1.4 bhiriyoni mune 50% reshiyo uye yakagadzwa muna Nyamavhuvhu 2007. Kune vashandi zviuru zviviri uye zvinokwana kuita mazana maviri ezviuru. Iyo kambani ine yepasi-kirasi magetsi chikuva. Iwo anotungamira zvigadzirwa eC, E, F, DEUTZ matatu zvigadzirwa mapuratifomu, matatu akateedzana o ...
KT-Perkins Series Diesel jenareta
Tsananguro: Perkins Injini Co, Ltd.iyo inotsigira yeCaterpillar Corporation uye ndeimwe yevatengesi vepasirese epasi pemugwagwa dhiziri uye engi gasi enjini. Perkins Injini Co, Ltd. yakavambwa muna 1932, iine goho regore rinosvika mazana mana enjini. Perkins inopa 4-2000 kW dhiziri uye gasi injini kune makuru ekugadzira michina yemagetsi senge Chrysler, Ferguson naWilson. Vanopfuura mazana masere vanotungamira vagadziri vanosarudza Perkins magetsi mhinduro mune zvekurima, magetsi generati ...
KT-Doosan Series Diesel jenareta
Tsananguro: Doosan Mobile Power chikamu cheSouth Korea's Doosan Boka. MunaNovember 2007, Doosan Group, imwe yemakambani eFortune 500 pasi rose, yakawana chikamu chemabhizinesi eIngersoll Rand. Mushure mekuteedzana kwekubatanidzwa kwebhizinesi, Doosan Mobile Power Chikamu chakazogadzwa. Doosan Mobile Power inopa nharembozha yesimba yezvivakwa zvepasirese, kuchera, kuvaka ngarava, kusimudzira simba uye mamwe maindasitiri ekuvaka enjiniya, kusanganisira nhare yemhepo c ...
Tsananguro: Ricardo Series Injini Diesel jenareta ine mutengo wakanaka mukana Chigadzirwa Rakagadzirwa: Ricardo Genset, Kofo Genset, Ricardo Diesel jenareta, Kofo Diesel jenareta, Ricardo Kofo Simba Chiteshi cheMagetsi jenareta, Genset, jenareta seti, Simba Chiteshi, Kugadzira seti, Kentpower, Cummins Dhiziri jenareta, Zvikamu zveJenareta, Zvikamu zveGeneset, Perkins jenareta, Chinyararire Diesel Genera Rondedzero:
KT-Yanmar Series Diesel jenareta
Tsananguro: Yanmar muJapan injini yedhiziri inogadzira ine nhoroondo yeanopfuura makore zana. Iyo kambani inogadzira injini yezvakasiyana siyana ekushandisa: mavhiri egungwa, zvekushandisa zvekuvaka, zvekushandisa zvekurima uye seti jenareta. Iyo kambani inotungamirwa muChaya, North District, Osaka, Japan. Japan yeYANMAR Co, Ltd. yatungamira pasi rese mune zvakatipoteredza zvigadzirwa zvine yakaderera kusvibiswa choutsi, pasi ruzha uye pasi kudedera. Chinangwa chaYanmar kugadzira en ...
Tsananguro: Yakatangwa muna 1951, Guangxi Yuchai Machinery Group Co, Ltd. (Yuchai Boka kwenguva pfupi) inotungamirwa muYulin, Guangxi Zhuang Autonomous Region. Iyo kambani mune investment uye zvemari manejimendi, yakanangana nekushanda kwemari uye manejimendi manejimendi. Sebhizimusi rakakura-rehurumende bhizimusi rakabatana, ine vanopfuura makumi matatu-varidzi-vese, vanobata, kana vanobatana-masheya maforivhi, iine huwandu hwehupfumi hwe 40.5 bhiriyoni yuan uye vangangoita zviuru makumi maviri vashandi. Yuchai Boka chinhu chemukati kupisa ...
Vimba nesu, sarudza isu
FUJIAN KENT MECHANICAL AND ELECTRICAL CO., LTD (KENTPOWER kwenguva pfupi), yakavambwa muna 2005 ine mari yakanyoreswa yemadhora emadhora gumi nemashanu emadhora, dhizaini uye gadzira dizeli jeneti seti, gasi jenareta seti, simba rezuva, kubatanidza kuungana, kutengesa uye kugadzirisa. service. Iyo kambani iri muguta reFuzhou, mudunhu reFujian, ine nharaunda ye100000 mativi emamirimita, vanopfuura vashandi ve100. Zvigadzirwa zvaro zvinonyanya kushandiswa sesimba rekuchengetedza kana simba rekukurumidzira munzvimbo zhinji dzakakosha, kusanganisira migwagwa mikuru, njanji, dzimba dzekugara, mahotera, migodhi, zvikoro, zvipatara, mahotera, mafekitori uye nharembozha uye hurongwa hwemari, nezvimwe.
verenga zvimwe >
Kambani nhau uye indasitiri nhau
DZIVA GENERETERI SET YEKUFUDZA MHUKA HUSBANDRY
Indasitiri yeacaculture yakakura kubva pachiyero kusvika pakuda kwekugadzira michina. Kugadzirwa kwemafuro, michina yekuberekesa, uye kufefetedza uye kutonhodza michina zvese zvakagadzirwa, izvo zvinoratidza kuti iyo d ...
HOSPITAL STANDBY DESIER GENERETA SET
Chipatara chekuchengetedza magetsi jenareta seti uye iyo bhangi backup magetsi inopa izvo zvakafanana zvinodiwa. Ose maviri ane hunhu hwekuenderera kwesimba magetsi uye yakanyarara nharaunda. Ivo vane yakaoma zvido pane iko kuita kugadzikana ...
Dhizeli GENERETA SET YEMAHARA INDUSTRY
KENTPOWER inoita kuti kutaurirana kuve kwakachengeteka. Diesel jenareta seti anonyanya kushandiswa kushandiswa kwesimba muzviteshi muindasitiri yekutaurirana. Matunhu-epamusoro nhepfenyuro angangoita mazana masere emakiromita, uye maseru-maseru masitepisi ari 300-400KW. Kazhinji, iko kushandiswa ...
Munda Diesel jenareta SET
Izvo zvinodiwa kuita kwejenareta yedhiziri yekuvaka munda ndeyekuti ive nekukwirisa kurwisa kurwisa kugona, uye inogona kushandiswa kunze kwese-mamiriro ekunze. Mushandisi anogona kufamba nyore, ane kugadzikana kuita uye nyore kushanda. KENTPOWER yakasarudzika chigadzirwa chimiro kumunda: 1. ...
ARMY Diesel jenareta SET
Yemauto jenareta yakatarwa yakakosha magetsi ekushandisa michina yezvombo pasi pemamiriro emunda. Inonyanya kushandiswa kupa rakachengeteka, rakavimbika uye rinoshanda simba kune zvombo zvekushandisa, kurwisa kuraira uye kutsigira kwemidziyo, kuona kushanda kwesimba rezvombo zvekurwa uye ne ...
Hofisi wedzera: Kwete. 12, Jinzhou North Road, Fuzhou, China
Factory wedzera: Tieling Industrial Zone, Fuzhou, China
For kubvunza pamusoro zvinhu zvedu kana pricelist, ndapota siya email nesu uye isu tichava nekuonana nemi mumaawa makumi maviri nemana.